Maitiro ekugadzirisa zvinokanganisa matambudziko paAirPods uye AirPods Pro | IPhone nhau
Alex Vicente | | IPhone zvishongedzo, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Kana paine ako eAirPod mamodheru ari kukonzera kukanganisa kunotsamwisa mune ruzha rwavanoburitsa, pane matanho akati wandei aunotora kuti uedze kugadzirisa usati waenda navo kuApple sevhisi.
Aya matambudziko anogona kuzivikanwa semuenzaniso mukufona, uko kwavanogona kuburitsa imwe echo kana kungorega kunyararidza kunyarara. Nekufamba kwenguva, matambudziko aya anogona kupararira uye kuita imwe kana ese maAirPods anotsamwisa.
Izvo zvakare zvinoenderana nerudzi rwemimhanzi yaunoteerera, uko mhedzisiro yekukanganisa ichave ichinyanya kuoneka. Kunyange zvakadaro, Pachave nenguva apo iwe paunoisa paAirPods uye usati wapa kutamba, diki uye inogumburisa buzz inogona kurira. Senge kuti ruzha kukanzurwa kweAirPods Pro kuri kushanda zvisirizvo.
Mune chero zviitiko zvacho, pane akateedzana matanho aunotora usati wabata Apple's technical service kuti vakwanise kukupa mhinduro. Aya matanho haakwanise kuvimbisa 100% dambudziko kururamisa asi vakashanda sekugona kwavo kuvaedza kubvira AppleInsider. Uye zvakare, ivo vanokurumidza kuita.
1 Nhanho yekutanga kugadzirisa kukanganiswa kweAirPods
2 Nhanho yechipiri ichave yekumisazve iyo AirPods
Nhanho yekutanga kugadzirisa kukanganiswa kweAirPods
Chekutanga pane zvese unofanirwa kuchenesa iyo AirPod iri kukonzera dambudziko nemazvo. Iwe unofanirwa kuve wakangwarira zvakanyanya neiyi poindi sezvo ese maAirPods uye iyo Pro modhi akaomesesa. Nguva dzose edza kuzviita pasina zvinwiwa, nejira nyorova Uye yeuka kubvisa mapedhi pane iyo Pro modhi kuti uachenese nenzira imwecheteyo.
Ndinovimba ichi chingave chiri chikonzero chedambudziko rako. Nekudaro, kana dambudziko rikaenderera mushure mekuchenesa kwakadzama, tinogona kuenderera mberi nekumisazve iyo AirPods kuyedza kuigadzirisa.
Nhanho yechipiri ichave yekumisazve iyo AirPods
Para ita iyo reset yeAirPods isu tinofanirwa kutevedzera anotevera matanho:
Isa maAirPod mubhokisi ravo
Mirira kwemaminitsi makumi matatu uye vhura muvharo wenyaya pasina kubvisa maAirPod
Pane yako iPhone, enda ku Zvirongwa, Bluetooth
Tsvaga maAirPod ako mune runyorwa rwemidziyo iripo wobva wadzvanya pane bhatani reruzivo rinozoonekwa ne "i" kurudyi.
Sarudza "Kanganwa mudziyo uyu" uye simbisa chiito
Vhara chivharo cheAirPods zvakare kwemamwe makumi matatu masekondi
Vhura muvharo unochengeta maAirPod mukati
Dhinda uye bata bhatani rekuseri pane iro kesi kusvikira mwenje upenye chena
Ne iPhone yako muamno uye isina kuvhurwa, tevera nzira yekubatanidza yeAirPods iyo yaifanira kuve yakagoneswa
Zvatiri kuita nemaitiro aya ndezvechokwadi kumanikidza AirPods uye iPhone kuti itange patsva kubva pakutanga nekubatanidza kwavo kweBluetooth. Senge vaive vasati vamboonana. Hazvinyatso kujeka kuti nei kubatana kweBluetooth dzimwe nguva kuchikundikana nekufamba kwenguva uye iyi inogona kunge iri mhinduro.
Kana nhanho mbiri idzi usati wakwanisa kugadzirisa dambudziko, zvinosuwisa Unofanira kuenda Apple kuti vatengi uye vanogona kukupa mhinduro. Unogona kuzviita kuburikidza Iyi link.
Kune rimwe divi, zvinoita sekunge Apple ingadai yakagadzira chishandiso chinobvumidza kuongorora mamwe matambudziko nemaAirPod uye ndokuigovera kuburikidza neApple Stores. Kunyangwe ichi ichokwadi kana kwete Apple ichaedza kutipa mhinduro kutanga dzatinogona kuita pachedu kugadzirisa nyaya nemaAirPod edu tisati tamboongorora chishandiso. Mushure mekudzidzisa uku unogona kuvaudza kuti wakazviita pavanokuudza.
Ngatizvigadzirise ne "nzira dzekumba" kana kuti titore kuApple Store, chakakosha ndechekuti tinogona kudzokera kunoteerera kumimhanzi, kufona, kuona mavhidhiyo uye marudzi ese eema multimedia nemaAirPod edu nehunhu hwavanogona tipei zvishandiso zvakakura zvakanyanya mumakore achangopfuura kubva kukambani yeCupertino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » IPhone zvishongedzo » Maitiro ekugadzirisa matambudziko ekutsausa paAirPods uye AirPods Pro
Webhusaiti yeApple inotendeuka neiyo nyowani iPhone 12 uye 12 Pro